_Ikhephu_, uluhlulekile uguqulelo lwefilimu kwinoveli kaJo Nesbø | Uncwadi lwangoku
_Ikhephu_, ululeko lwefilimu olungaphumelelanga lwenoveli kaJo Nesbø
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Inoveli, Inoveli emnyama
Ekupheleni kukaJulayi Ndabhala Oku kubhaliwe emva kokubona inqwelwana yokuqala yefilimu yohlobo lwe Umntu weqhwa, Iinoveli ezithengisa kakhulu zikaJo Nesbø. Ndigcine ithoni iqulethwe kwaye igcinwe kwinto esinokuyilindela bobabini abafundi bombhali waseNorway kunye nababukeli ngaphandle kwezalathiso. Ewe, yakhutshwa kwiintsuku ezilishumi ezidlulileyo kwaye namhlanje sele ndinayo uluvo lokuba ndim kuphela onokuthatha uxanduva kwaye ndandisele ndikrokrela.
Kwakhona i-cinema ayitshisi ukubhalwa kwencwadi yenoveli. Kwaye le ibuthathaka ngakumbi kuba imathiriyeli ibingaphezulu kokulungileyo malunga nomxholo, iatmosfera kunye nabalinganiswa abakhulu abadalwe nguNesbø. Ngenxa yesidalwa sakhe esithandekayo nesithandekayo, UMkomishinala uHarry Hole, wayengafanelanga umzobo okanye ukubalisa elinye lawona mabali akhe amnandi ahlanjwe, engenanto kwaye ayadika. Nokuba ngumlawuli, iSweden uTom Alfredson, okanye abalinganiswa bamazwe aphesheya nabangaqhelekanga abayi kulo msebenzi.
2 Umlawuli kunye nomdlalo bhanyabhanya
4 Kwaye enye into ebalulekileyo kukuba ...
5 Ngoko ...
Kuya kufuneka uyibone le movie, ngakumbi ngakumbi ukuba ungumfundi ongenamiqathango kaJo Nesbø kwaye uyakujonga oko UHarry hole Ungomnye wabalinganiswa abanoncwadi abanamandla, abanesidima kunye nabona badumileyo yenoveli yolwaphulo-mthetho. Ngaphezu koko, kuya kufuneka ubone ukuba unoluvo olugqibeleleyo nolugqibeleleyo kunye nemvakalelo yokuqhubeka nokuzenza izithixo ngaphandle kwengxaki. Kwaye iya kuqhubeka nokwenza njalo. Kungenxa yokuba le Inguqu engeyomfuneko bhanyabhanya akukho nto itshintsha kulonwabo Sifumene abafundi beNesbø kunye neenoveli zabo.
La ukuphoxeka Kungenxa yokuba le movie yayingafuneki kwaye isilele, kodwa ngenxa indolence enzulu xa usenza. Mhlawumbi ekuqaleni ingqondo ekhanyiselweyo yagqiba kwelokuba ingumbono olungileyo. Umbhali waseNordic wabona bathengisi babalaseleyo nabakhulu, ukuba i-cinema ebandayo inemfashini kwaye ihlala inika umdlalo wamanye amazwe, oko kuvakala UMartin Scorsese njengomlawuli, amagama aqaqambileyo kubalingisi bamanye amazwe, iNorway entle eneseti emhlophe kakhulu ... Mhlawumbi.
Ke iScorsese ihlala kuphela njengomvelisi, amaMelika abeka imali kwaye asayina UTom alfredson, Umlawuli waseSweden obizwa ngokuba ludumo kunye cast kunye neentlanga ezininzi kakhulu kwaye, ngokubanzi, ayihambelani neenkcazo ezibonakalayo zabalinganiswa boncwadi. Kwaye kwenzeka ntoni. Oku.
Umlawuli kunye nomdlalo bhanyabhanya
Kwaye kubonakala ngathi uAlfredson wayehleli ngenye imini esihlalweni somlawuli naphakathi kokulandelelana nokulandelelana okanye watshaya icuba okanye walala kancinci. Kungenxa yokuba ukuba ebekhe wayekhona apho bekufanele ukuba ubekhona, le bhanyabhanya ayinakuphuma njalo iphelile, ihlambile, i-bland kwaye iyancipha. Ngokuchasene noko iinoveli zeNesbø kwaye ngoobani kwaye njani abalinganiswa babo.
Ndiqinisekile ukuba Ukuba le projekthi yenziwe ngabantu baseNorway, ngekhe ihambe kakubi. SKuya kufuneka ubone eyona ibalaseleyo Isisa saseDenmark seSebe Q, Ibhalwe nguJussi Adler-Olsen. Kodwa akunamsebenzi ukulilela into engenakwenzeka.
Into ekhoyo yile: akukho nto, a Amampunge ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Kuphela ezo ntaba zintle zaseNorway zigcinwa, umkhenkce, ikhephu kwaye oko kubanda kuzukileyo kwabo bethu bayithandayo. Eminye kukulandelelana kwezinto ezicothayo, ezimnyama kunye nezoxinzelelo kwindawo yokudideka, ngakumbi ekutsiba kwexesha. Akukho mphefumlo, akukho bomi okanye mvakalelo. Y Akukho mntu ubonakala eyazi apho akhoyo, ngakumbi ke udlala bani. Kwaye ukuba bayakwenza oko, kubonakala ngathi bayazibuza ukuba benza ntoni phaya.
Eyokuqala, ndathandwa ndim Michael Fassbender. Wayebonakala eyamkele into yokuba akazange anike umzimba kaHarry Hole kwaye wazikhawulela ekubekeni ubuso bokugqithisa ingqele ebonakalayo kwaye ehambisa amashiya amancinci. Y UHarry Hole akayondoda leyo Umxholo, awubandi, awonwabisi okanye uyadandatheka, kodwa uyathandeka, awunakulindelwa, uyasendle kwaye uyathandana. Kwaye ubunxila, kodwa hayi inxila Le yokuba ngamaxesha amathathu bayibonise ilele phantsi, sele befuna ukuba uyikholelwe. Inye kuphela inkcukacha ebonakala ingabalulekanga kodwa ibalulekile kubafundi bakolu ngcelele: abayikubetha ibhotile ye UJim Beam kuba babeka enye yevodka.
Kwaye owesibini, lowo ngumlingisi wehlelo (weefilimu zasesikolweni, ewe) ngubani ongumFrentshi UCharlotte Gainsbourg, ulahlekile kakhulu kwindima engaqhelekanga kunye nobunzima obufana nobukaRakel Fauke. Ke ngoko akunakubakho chemistry okanye nantoni na enokuthenjwa phakathi kwabalinganiswa ababini boncwadi abamele into ethile, kungenxa yekhemistri, uthando kunye nothando abanalo.. Kukuthini kunye nokubanda ekucingelwa ukuba kukuyekelela indawo apho bobabini abadlali babelana khona kwelona xesha lithandwayo lothando.
Kodwa kukuba akukho namnye kubo olungileyo kwaye umququ wokugqibela kukubona umntu ongaziwayo wokuphinda afunde Val Kilmer. Okanye yintoni inkcitho ukuba ngabadlali abalungileyo njengesiNgesi UJames D'Arcy okanye isiNorway UJakob Oftebro. Ekuphela kwazo ingagcinwa zincinci ii-swedes URebecca Ferguson njengoKatrine Bratt noJonas Karlsson njengoMathias Lund. Kodwa ngoku.
Kwaye enye into ebalulekileyo kukuba ...
… Ukuba abafundi beNesbø bangayifumana ingenasiseko, ababukeli abangayaziyo indawo yeHole balahlekile ngokungathandabuzekiyo kuloo ngxelo yahlanjwa. Kwaye abayi kuyiqonda le mizobo yabalinganiswa, ingakumbi eyona iphambili. Malunga ne Iipunto ukuqala, ingaba i-Nordic cinema ihlala ibabonisa njani, zixutywe nokungakhathali ngaphambi kwento oyibonayo.
Ngapha koko, ezinye iinkcukacha zinokuchazwa, njalo isigqibo sokugqibela ukuba ndiyayiqonda eyona inokwenzeka (kwaye iyavakala) ukuziqhelanisa. Kodwa ngekusele kukuphakama kwentlekele ukuba babenokuzama ukudubula isiphelo esothusayo soncwadi.
Akukho nto yenzekayo. UHarry Hole akanabala, akanasiphako kwaye akafezekanga ngokugqibeleleyo kwisiseko sezigidi zabafundi bayo kwihlabathi liphela. Kodwa kungcono bangayidlali kwakhona kwi-cinema. Abakwenzelanga nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » _Ikhephu_, ululeko lwefilimu olungaphumelelanga lwenoveli kaJo Nesbø
UNeruda akazange afe ngumhlaza
Isishwankathelo somsebenzi "La casa de Bernarda Alba" nguFederico García Lorca